Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle.(iikhilomitha eziyi-10 ukusuka elunxwemeni) - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle.(iikhilomitha eziyi-10 ukusuka elunxwemeni)
Nea Artaki, Chakida, Evoia, Greece
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChristina
Igumbi lokulala elitsha elinendawo entle yokubuka imizuzu emibini ukusuka elwandle. Isilingi , umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, oxhotyiswe ngezinto ezisisiseko. Ilungele uhambo oluya kumalwandle akufutshane.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle entsha nenendawo entle yokubuka ulwandle. Isilingi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, oxhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko. Ilungele uhambo oluncinci olujikeleze le ndawo olugcwele iilali ezincinci ezisecaleni kolwandle.
Yiflethi okanye indlu ekwicomplex entsha enesilingi yeplanga. Yiflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo nevulekileyo elungele undwendwe olunye okanye ezimbini. Ime kufutshane namalwandle amaninzi, eyona ndawo ikufutshane nesitrato(umzuzu omnye uhamba ngeenyawo). Ukubona ukusuka ebhalikhoni yenye yezona zinto zintle. Indawo yokupaka iyafumaneka.
Iflethi inazo zonke izinto eziyimfuneko, umoya obandayo noshushu, iifestile ezineglasi ezimbini ezimeleyo ezinezikrini.
4.95 · Izimvo eziyi-87
Iindawo ezikufutshane ezithe cwaka. Imarike encinci kunye nendawo yokubhaka kwimizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ukusuka eflethini.
Iindawo ezikufutshane ezithuleyo. Imarike encinci kunye nendawo yokubhaka imizuzu eyi-5 uhamba ngeenyawo.
Mna nabazali bam siyafumaneka ukuba singafumana nayiphi na enye inkcazelo.
Inombolo yomthetho: 00000086097
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nea Artaki, Chakida